GTT International - Genève: Valan-dresaky ny Pr R. Ranjeva - Paris, 07/12/2014 : Fanontaniana sy soso-kevitra avy amin’ny GTT International-Genève
Valan-dresaky ny Pr R. Ranjeva - Paris, 07/12/2014 : Fanontaniana sy soso-kevitra avy amin’ny GTT International-Genève
Valan-dresaka Pr Raymond Ranjeva - Paris, 07/12/2014
Anisan’ny olana voalohany eo amin’ny firenena ny fitsarana sy ny fitsaboana mitanila, baikon’ny fitondrana. Tsy mahavita misahana sy miahy ny fahasalaman’ny vahoaka malagasy ny fitondrana, tsy manana fitokisana mihitsy amin’ny fitsarana izy ireo. Ireo lafiny roa ireo no aretim-be mahazo ny firenena ka mila fanasitranana. Maro ireo fikambanan’ny Mpitsara kanefa tsy misy heno mihetsika.
Misaotra anao mialoha Atoa Profesora.